Derbigii Manchester oo barbaro ku dhamaaday, halka derbigii Madrid lagu kala baxay… – Hagaag.com
Derbigii Manchester oo barbaro ku dhamaaday, halka derbigii Madrid lagu kala baxay…
Posted on 13 Diseembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Ciyaartii derbiga Manchester ayaa ku dhamaatay barbaro goolal la’ aan ah, labada kooxood ayaa isku arkay garoonka Manchester United maalintii Sabtida, wareega 12aad ee horyaalka Ingriiska. Dhinaca kale kooxda Aston Villa oo hal gool uga badisay kooxda Wolverhampton halka Newcastle 2-1 uga badisay West Bromwich.
Labada koox ayaa ku guuldareystay inay ka faa’iideystaan ​​dhammaan fursadihii ay heleen, sidaas darteed mid walba dhibic ayuu helay.
Manchester City ayaa leh 19 dhibcood oo fadhida kaalinta sideedaad, halka Manchester United ay leedahay 20 dhibcood iyada oo fadhida kaalinta todobaad.
Dhinaca kale Real Madrid ayaa dib u shiday tartanka loogu jiro hogaanka LaLiga iyadoo 2-0 ku garaacday kooxda hogaanka heysa ee Atlético Madrid kulan darbi ahaa oo ka dhacay caasimada Spain, taasoo ku soo celisay rajadii guulaha boqorka dhaawacan.
Garoonka Alfredo Di Stéfano, Real Madrid ayaa ka adkaatay kooxda ay xafiiltamaan ee Atlético de Madrid wareega 13-aad ee Horyaalka Spain, waxayna gaarsiisay guuldaradoodii ugu horeysay ee horyaalka xilli ciyaareedkan.
Guushan ayaa sare u qaaday dhibcaha Real Madrid oo ka dhigtay 23 dhibcood, si ay uga soo baxdo kaalinta afaraad una soo degto kaalinta saddexaad, iyadoo 3 dhibcood ka hooseysa Atlético de Madrid, kaasoo weli hoggaanka haya inkasta oo dhibcihiisii ​​ay ku joogsadeen 26 dhibcood, wuxuuna ciyaaray hal kulan ka yar kuwa Real Madrid.
Real Madrid ayaa si deg deg ah ugu turjumtay maamulkeeda ciyaarta iyada oo dhalisay goolkeedii ugu horeeyay daqiiqadii 15-aad, iyada oo uu u dhaliyay xiddiga reer Brazil ee Casemiro.
Goolka ayaa siiyay kalsooni weyn boqortooyada waxayna awood u yeelatay inay kor u qaaddo hogaaminteeda iyadoo ay dhalisay goolka labaad daqiiqadii 63aad darbo sidii gantaal ahaan loo tuuray oo ka soo baxday Daniel Carvajal, kaasoo ku dhuftay birta midig isla markaana ka booday dhabarka Oblak ee goolka.